जगदेव ठाकुर कसरी भए भगवान ? कसरी बन्यो मन्दिर ? हेर्नु’होस – live 60media
जगदेव ठाकुर कसरी भए भगवान ? कसरी बन्यो मन्दिर ? हेर्नु’होस
हिन्दू धर्ममा मानवका रुपमा जन्म लिएर पनि भगवानका रुपमा पुजिएका धार्मिक पात्रका रुपमा चिनिन्छन्– राम, श्रीकृष्ण । बौद्ध धर्मावलम्बीहरुले भगवानका रुपमा पुज्ने गौतम बुद्धले पनि मानवकै रुपमा जन्म लिएका थिए । यी ऐतिहासिक तथा धार्मिक पात्रका पुरुषार्थ र जीवनकथा समेटिएर धार्मिक ग्रन्थ बने, ठुलो दायरामा यिनको पूजा गरिन्छ र यिनको योगदानको चर्चा हुने गरेको छ ।
सानो दायरामा नै सही, सिरहा जिल्लामा एक अर्का मानवको पनि पूजा हुने गरेको छ, जसलाई स्थानीयवासीले भगवानका रुपमै लिने गर्दछन् र उनको मन्दिरसमेत बनाएका छन् । उक्त मन्दिरमा श्रद्धापूर्वक उनको पूजा गरिन्छ, श्रद्धालुहरुले विभिन्न मनोकांक्षा राखेर भाकल गर्ने र मनोकांक्षा पूरा भएपछि सोहीअनुसार पूजा गर्ने प्रचलन छ ।
सिरहाको औरही गाउँपालिका– ५ निवासी भाइजी ठाकुरका छोरा जगदेव ठाकुरको मृत्यु ४७ वर्षअघि भएको थियो । जगदेव बाबाका नामले चिनिने त्यतिबेलाका चर्चित झाँक्री स्व. जगदेव ठाकुरको छुट्टै मन्दिर बनाइएको छ, जहाँ उनको पूजा हुने गरेको छ । भगवानको दर्जा दिएर बनाइएको उनको मन्दिरमा श्रद्धापूर्वक मानिसहरु जाने, भाकल गर्ने र आकांक्षा पूरा भएपछि भाकल चढाउने गर्छन् । जगदेव बाबालाई पुकारेर मनोकामना गरेमा अधिकांशको मनोकामना पुरा हुने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
‘उहाँको मन्दिरमा गएकाहरु कहिल्यै निराश हुनु परेको छैन, उहाँले सबैको इच्छा पुरा गर्नुभएको छ,’ जगदेव बाबाका छोरा श्यामसुन्दर ठाकुर (राजा) ले भने, ‘यो (औरही) गाउँको मात्रै होइन, वरपरका गाउँ तथा भारतसम्मका मान्छेहरु यहाँ आउने गर्छन्, कसैले पाठी, परेवा, हाँस, लड्डु, घण्टी लगायत चढाउँछन् । कसैले मन्दिरका लागि झ्याल, कसैले ढोका बनाइदिएका छन् ।’
स्थानीय बासिन्दा वकिल कामतका अनुसार नयाँ काम थालनी गर्दा होस् वा कतै यात्रा गर्दा जगदेव बाबालाई नै स्थानीयवासीले सम्झन्छन्, निःसन्तान होस् वा परिवारका कुनै संकट आइलाग्दा पनि बाबालाई नै पुकार्ने प्रचलन छ । कतिपयका लागि यस्ता कुरा अन्धविश्वास लागे पनि आफूहरुलाई जगदेव बाबाप्रति विश्वास लाग्ने गरेको र मनोकामना राखेकाहरुले विश्वास प्रकट गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।
मन्दिरकै छेउमा घर रहेका कामत भन्छन्, ‘जगदेव बाबा सर्वसाधारणका लागि भगवान नै हुनुभएको छ । यदि मान्छेको मनको इच्छा पुरा नभएको भए कसरी दिनदिनै मन्दिरमा आएर मानिसहरु उहाँको पूजा गर्छन् ? चढौनाहरु चढाउँछन् ? इच्छाएका काम पूरा भएर पो मान्छेहरु यहाँ आउँछन् नि !’
जगदेव ठाकुर कसरी भए भगवान ?
त्यतिबेला जगदेव ठाकुर प्रख्यात झाँक्री थिए । आसपासका गाउँमा मात्र होइन, आसपासका क्षेत्र, छिमेकी देश भारतमा समेत प्रख्यात थिए । उनीकहाँ झारफुक गराउन टाढा–टाढाबाट मानिसहरु आउँथे, उस्तै पर्दा उनी आफै पनि टाढा–टाढासम्म पुगेर तान्त्रिक पूजा गर्दथे । औषधि–उपचारको राम्रो प्रवन्ध नभएको त्यो समयमा बालबालिकाहरु बिरामी हुँदा उनीकहाँ नै झारफुकका लागि ल्याउने गरिन्थ्यो । बिरामी बच्चालाई उनले छोएकै भरमा निको हुने गरेको बुढापाकाहरु सम्झन्छन् ।
जगदेव बाबाको सहयोगीको रुपमा काम गरेका शालिग्राम ठाकुर भन्छन्, ‘वर्षौंसम्म सन्तान नपाएर निराश भएकाहरुलाई पनि जगदेव बाबाले हेरेपछि सन्तान भएका थुप्रै उदाहरण छन् । घरायसी लफडा भएर घरबार बिग्रेकालाई सुधारेको पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।’
कसैको घरमा ग्रहदशा छ, भुतप्रेतले ठाउँ लिएको छ, घरका सदस्यलाई दुःख दिइरहेको अवस्थामा पनि जगदेवले नै ठिक पारेर धेरैको उद्धार गरेको उनको दावी छ । ‘जगदेव जिउँदो हुँदा आफ्नो तान्त्रिक विद्यालाई कहिल्यै दुरुपयोग गर्नुभएन, उहाँले चाहेको भए धेरै गर्न सक्नु हुन्थ्यो, सम्पत्ति नै जोड्न सक्नु हुन्थ्यो तर उहाँले आफ्नो घरपरिवारका लागि केही गर्नुभएन, उहाँले जे गर्नुभयो अरुको भलाइका लागि नै गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘अहिले मृत्युपछि पनि उहाँले जनतालाई सेवा गरिरहनु भएको छ ।’ जगदेव बाबाको मन्दिरमा आस्था बोकेर पूजाका लागि आउनेहरुलाई यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
स्थानीयवासीका अनुसार जगदेव बाबाले १५ वर्षको उमेरमै तान्त्रिक विद्या सिकेका थिए । उनका सहयोगी शालिग्रामले जगदेव बाबाले तान्त्रिक विद्या हासिल गरेको प्रसङ्ग जनाएअनुसार सिरहाको कसहास्थित आफ्नो दिदीको घरमा गएको बेला दुईजना महिलाले उनको दिदीको खेतबाट चना उखेलेर चनाको कोसा खाएका थिए । चना खाएको देखेपछि जगदेवले उनीहरुलाई गाली गरेका थिए ।
उनीहरुलाई गाली गर्ने बित्तिकै जगदेवको पेट दुख्न थाल्यो । बेस्सरी पेट दुखेपछि जगदेव रुन र कराउन थाले, पीडाले छटपटाउन थाले । त्यो देखेर चना खानेमध्येकै एक महिलाले भनिन्, ‘एक लोटा पानी खुवाउँछौं भने तिम्रो पेट ठिक गर्दिन्छु ।’
त्यसपछि जगदेव दगुर्दै घर गए, अनि पानी ल्याएर ती महिलाहरुलाई दिएका थिए । लगत्तै जगदेवको पेट दुखाइ ठिक भयो । उनीहरुले पानी खाईसकेपछि जगदेवलाई लोटामाथि राखेर आकाशमा उडाएका थिए रे । शालिग्रामले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘मलाई गुरु जगदेव बाबाले सुनाउनु भएको कुरा हो यो । जगदेव बाबालाई तीन चारपटक तलमाथि–तलमाथि गराएका थिए रे ।’
उनका अनुसार त्यसपछि ती महिलाले जगदेवलाई भने, ‘ल ! तिमीले अब तान्त्रिक विद्या सिक्यौं, अब मेरो नाम लिएर जहाँ पनि काम गर्न सक्छौं तर सबैको भलाइमात्र गर्नू, कसैलाई दुःख नदिनू ।’
शालिग्रामका अनुसार सिरहाको कमलाखोँच भने ठाउँका ती महिलाहरु नामी डायन थिए रे । ती दुई महिलामध्ये केछर्नी नामकी महिलाबाट जगदेवले तान्त्रिक विद्या सिकेका थिए ।
१५ वर्षकै उमेरदेखि जगदेव बाबा आफ्नो साधना र विद्याले सबैको मन जित्न सफल भएका थिए । तान्त्रिक विद्यामा उनले सबै साधना पूरा गरेका थिए । मसानघाटसम्म समेत पुगेर त्यसको साधना गरिसकेका उनी आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्थे । उनका काकाका छोरा कैला शर्मा भन्छन्, ‘जगदेवलाई अहिले जति पुज्छन्, त्योभन्दा बढी जिउँदो हुँदा उहाँको ख्याती थियो, उहाँले गर्नुभएको हरेक कार्य पक्का हुन्थ्यो, कुनै निरर्थक हुँदैनथ्यो ।’कैला शर्माका जगदेव बाबाले गाउँलेलाई थुप्रै चमत्कार देखाएपछि विस्तारै विस्तारै उनीप्रति विश्वास बढ्दै गएको थियो ।
जगदेव बाबाको निधन
उनको मृत्यु अकाल मै भयो । आफू सानै उमेरको हुँदा बुवाको निधन भएकाले धेरै कुरा आफूलाई थाहा नभए पनि छरछिमेक र गाउँवासीबाट धेरै कुरा सुनेको र थाहा पाएको उनले बताए । ‘बुवाको निकै नाम चलेको थियो, जताततैबाट मानिसहरु विभिन्न समस्या लिएर आइरहन्थे, अकालमै मृत्यु भयो,’ उनले भने ।
जगदेव बाबाको मृत्युले त्यतिबेला गाउँ नै स्तब्ध भएको थियो । छरछिमेकको गाउँमा पनि उनको निधनले धेरैजना दुःखी भएको शालिग्राम ठाकुरले बताए । उनले भने, त्यतिबेला हामी निकै मर्माहत भएका थियौं, हामीले एकजना अभिभावक गुमाएका थियौं, मैलेमात्र होइन, उहाँबाट धेरैले तान्त्रिक विद्या लिनुभएको थियो, उहाँले धेरैजनालाई गुन लगाउनु भएको छ ।’
कसरी बन्यो मन्दिर ?
२०४६ सालमा औरहीमा ठुलो आगलागी भयो । जतिगरे पनि आगो नियन्त्रणमा आइरहेको थिएन । एक÷डेढ हप्तासम्म जताजतै आगो लाग्न थाल्यो । कहिले यता, कहिले उता आगो लाग्थ्यो । त्यसले गर्दा सबै हैरान थिए ।
स्थानीयवासीका अनुसार गाउँकै एकजना धामी राजाराम यादवले आफ्नो तान्त्रिक विद्याले गाउँमा लागो लगाएको भनेर चर्चा हुन थाल्यो । यस्तो हल्लापछि राजाराम यादव गाउँ छाडेर भागे । गाउँका मान्छेले राजारामलाई खोजेर ल्याए । राजारामको शरीरमा जगदेव बाबाको आत्मा प्रकट भएको स्थानीय विश्वास गर्छन् । उनले पनि गाउँमा आगो लगाउने गरेको स्वीकार गरे ।
जगदेव बाबाको आत्माले गाउँमा आफूलाई बस्ने ठाउँ दियो भने गाउँमा कहिल्यै केही हुँदैन र आगो पनि नियन्त्रण हुन्छ भनेको विश्वासका साथ मन्दिर बनाइयो । ठाकुरको दावी छ, ‘गाउँको पश्चिमतर्फ रहेको एउटा पोखरीको डिलमा सिमलको रुख थियो । त्यही रुख भएको ठाउँमा जगदेव बाबाको स्थान नामाकरण गरियो र भोलिपल्ट गएर त्यहाँ स्थान स्थापित गरियो । त्यसपछि गाउँको आगो आफै नियन्त्रण भयो ।’
त्यसबेलादेखि गाउँमा कुनै समस्या भएन । राजाराम धामीले जगदेवको नाममा तान्त्रिकको काम गरिरहेका थिए । बिस्तारै राजाराम राम्रो नियतका मान्छे नभएको गुनासो आउन थाल्यो । राजारामले गरेको काममा निकै गुनासो आउन थाले । स्थानीयवासीका अनुसार औरही गाउँमा फेरि पहिलाभन्दा ठुलो आगलागी भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईसमेत हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्न आए ।
त्यो बेला पनि तीन/चारदिनसम्म आगो नियन्त्रण भएको थिएन । पुनः राजारामले नै आगो लगाएको कुरा सबैतिरबाट आउन थाल्यो । राजारामलाई समातेर जगदेव बाबाको पूजापाठ गर्न लगाएपछि गाउँ पुनः शान्त भयो । त्यसरी नै विस्तारै विस्तारै जगदेव बाबाप्रति आस्था बढ्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
त्यसपछि गाउँमा उनको नामको मन्दिर बन्यो । धुमधामका साथ पूजापाठ हुन थाल्यो । अहिले दैनिकजसो सो मन्दिरमा पूजापाठ हुन्छ । उनका छोरा राजाले पूजापाठ गर्छन् र बुबाको नामबाट गाउँमा काम गर्छन् । उनी पनि बुवाजस्तै झारफुक गर्ने गर्छन् ।
← ३० जना लुटेराले सहर नै कब्जा गरेर सबै बैकका पैसा निकालेर सडकमा छरेपछि…
हरेक दिन बिहान बिरे नुन मिसाएको पानी पिउनुहोस् हुनेछ यस्ता फाइदाहरु …. →